Sefania 3 AKCB – Zephaniah 3 KJV | Biblica
Sefania 3 AKCB – Zephaniah 3 KJV
1Nnome nka nhyɛsofo kuropɔn
atuatew kuropɔn a ho agu fi!
2Ɔnyɛ osetie mma obiara
onnye nteɛso biara nto mu.
Ontwiw mmɛn ne Nyankopɔn.
3Nʼakannifo yɛ gyata a wɔbobɔ mu,
ne sodifo yɛ mpataku a wɔnam anadwo,
a wonnya biribiara mma adekyee.
4Ne nkɔmhyɛfo yɛ ahantan;
Nʼasɔfo gu kronkronbea ho fi.
5Awurade a ɔte ne mu no yɛ ɔtreneeni;
ɔnyɛ mfomso biara.
Adekyee biara, ɔda ne trenee adi,
na onni huammɔ da,
nanso amumɔyɛfo de, wonnim aniwu.
madwiriw wɔn abandennen agu.
Wɔn mmorɔn so adeda mpan,
Wɔasɛe wɔn nkuropɔn;
a obiara renka.
7Meka kyerɛɛ kuropɔn no se,
‘ampa ara wubesuro me
na woagye nteɛso ato mu!’
Na afei ne tenabea rensɛe,
na mʼasotwe biara nso remma no so.
Nanso wɔn ho peree wɔn
sɛ wɔbɛkɔ so ayɛ bɔne, wɔn nneyɛe nyinaa mu.
8Enti twɛn me,” sɛnea Awurade se ni,
“na da no mɛsɔre adi adanse.
ne ahenni ano
na mahwie mʼabufuw agu wɔn so
Me ninkutwe abufuw gya mu no,
asase nyinaa bɛhyew.
9“Afei medwira nnipa no ano,
10Mʼasomfo, me nkurɔfo a wɔabɔ ahwete no
befi nsubɔnten a ɛwɔ Kus nohɔ
de wɔn afɔrebɔde abrɛ me.
11Saa da no, wo Yerusalem, wɔrengu wʼanim ase
wɔ nneyɛe bɔne a woayɛ atia me ho,
efisɛ meyi afi saa kuropɔn yi mu,
wɔn a wodi ahantan mu ahurusi,
wɔ me bepɔw kronkron no so.
12Nanso megyaw wɔ wo mu
wɔn a wodwo na wɔbrɛ wɔn ho ase,
na wɔde wɔn ho to Awurade so no.
13Wɔrenyɛ bɔne biara;
na wɔn ano renka nnaadaasɛm
wobedidi na wɔada,
14To dwom, Ɔbabea Sion;
teɛ mu dennen, Israel!
Ma wʼani nnye, na di ahurusi wɔ wo koma nyinaa mu,
15Efisɛ Awurade ayi wʼasotwe afi wo so,
wama wo tamfo asan nʼakyi.
Awurade, Israelhene ka wo ho;
16Saa da no, wɔbɛka akyerɛ Yerusalem se,
Mma wo nsa mu ngow.
17Awurade wo Nyankopɔn ne wo wɔ hɔ,
Ɔyɛ ogyefo ɔhoɔdenfo.
Nʼani begye wo ho
ne dɔ mu, ɔrenka wʼanim bio,
ɔde nnwonto bedi wo ho anigye.”
18“Meyi wɔn a wodi awerɛhow
wɔ wʼafahyɛnna ahorow a woahwere;
a ayɛ adesoa ne animguase ama wo no ho.
19Saa bere no me ne wɔn
a wɔhyɛɛ wo so nyinaa bedi.
Mɛkamfo wɔn ahyɛ wɔn anuonyam
asase biara a woguu wɔn anim ase wɔ so no so.
20Saa bere no, mɛboaboa mo ano;
saa bere no, mede mo bɛba fie.
Mɛhyɛ wo anuonyam na makamfo mo
bere a mede mo ahonyade bɛsan ama wo
na mode mo ani behu no,”
AKCB : Sefania 3